Egweri biini Iweghachite - Naghachi ehichapụ faịlụ site egweri biini
Egweri biini na PC gị na
Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Recyle Bin?
Olee otú iji weghachi ehichapụ faịlụ mgbe nsị egweri biini
Naghachi faịlụ mgbe ihichapụ si egweri biini - Free Ngwọta
Naghachi faịlụ mgbe ihichapụ si egweri biini - irè ngwọta
Ọzọkwa Atụmatụ mgbe data mgbake
The egweri biini on Windows bụ dị ka "Mkpofu" na Mac, it`sa ebe ehichapụ faịlụ na-echekwara bụrụ na nke ọ bụla n'ime ha e accidently ehichapụ site na kọmputa. Anyị na-enwe na-agbake data si egweri biini ọ bụrụ na anyị haven`t bupụrụ ya ma ọ bụ tụpụ ọtụtụ faịlụ n'ime ya nke na ọ karịa ndị ohere ịgba.
N'ezie ohere ịgba maka egweri biini bụ kemeghi - ndabara size bụ 10% nke mbụ 40GB na 5% nke ọ bụla oke n'elu 40GB (ọ na-adabere na gị Windows OS version), ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ya, ị nwere ike -right pịa na egweri biini na akara ngosi na desktọpụ gị wee họrọ "Properties" site menu, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ nhọrọ nke mwube egweri Bin`s size na ebe (ejikari na diski ike C). Ezie na ị bụ free ịtọ size gị egweri biini, it`s ka na-adịghị na-atụ aro ka ọ karịrị 50% gị Disk C, ma ọ bụ it`ll iji ukwuu na-agba ọsọ ohere nke gị usoro na-akwụsịlata kọmputa gị.
Nọmalị faịlụ na ị ihichapụ si na desktọpụ gị ma ọ bụ ike mbanye partions ka nwere ike ike dị na egweri biini, ị dị nnọọ mkpa Chọta na họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na egweri biini, mgbe ahụ, nri-pịa ma kụrụ "Weghachi" ke menu . The faịlụ ga-aga azụ ka ọnọdụ ha bụ. Na nke a bụ ndị kacha na kasị nkịtị ụzọ na-agbake ehichapụ faịlụ.
Olee otú naghachi egweri biini ehichapụ faịlụ
Mgbe anyị na mberede ihichapụ dị mkpa faịlụ site ọkụkụ bọtịnụ "Hichapụ", anyị nwere ike anya n'ihi na ha na egweri biini. On kasị oge, anyị ga-ahụ na-ehichapụ faịlụ na na nchekwa, ma ihe ma ọ bụrụ na egweri biini e bupụrụ mgbe nhichapụ? Ka ọ pụtara faịlụ / data na-na-adịgide adịgide-arahụ?
Azịza ya bụ na "ọ dịghị" - na nri ụzọ na a obere chioma anyị nwere ike mgbe niile na-azụ ihe anyị furu efu, ọ bụrụ na nhichapụ e mere anya gara aga:
Mgbe anyị bupụrụ ihe egweri biini, faịlụ na ya n'anya, ma n'ezie ha na-adịghị wepụrụ site na kọmputa ma - na data ahụ ka dị adị na diski ike na raw formats. Ha ga-anọ n'ebe ahụ ruo mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ data. Tupu na anyị mgbe niile nwere ohere wepụ na weghachi ha. Na that`s ihe data mgbake ngwaọrụ enyere anyị aka ime.
Tupu n'ịrụ data mgbake site na bupụrụ egweri biini, anyị mkpa:
Irè data mgbake software
Kwụsị atụba ọhụrụ ọ bụla faịlụ n'ime egweri biini
Eme ya ozugbo o kwere omume na-amụba ohere nke a zuru mgbake
Ngwọta 1: Free ngwaọrụ naghachi faịlụ mgbe ihichapụ si egweri biini
Recuva bụ a fechaa na free faịlụ mgbake ngwá ọrụ maka Windows. Ọ ga-iṅomi disks na kọmputa gị na mgbe ahụ na-egosipụta na nso nso-ehichapụ faịlụ a na ndepụta. Ị ga-enwe ike ịlele ọnụọgụgụ nke faịlụ ma ọ bụrụ na ha na-akara dị ka recoverable.
The scanning usoro-agba n'ezie ngwa ngwa, nke masịrị m mgbe I`m eme mbụ m ule. Ma pụta nke scanning amama ịdịtụ akụda - bụghị ọtụtụ faịlụ a chọpụtara na na na na 1/3 n'ime ha nwere ike gbakee. Onye ọ bụla nke disks nwere ike ahọrọ maka onye Doppler usoro, ma ọ dịghị nhọrọ maka a egweri biini Doppler (mkpa ka ị pịnyere na "\_ $ Recycle.Bin" ke search mmanya na-eme ka ọ iṅomi egweri biini naanị)
Na okwu, Recuva bụ ngwa ngwa, fechaa na mfe iji, ma enweghị elu ndị ọzọ ọrụ na dịtụ mediocre mgbake-qualtiy-eme ka ọ na-erughị pụrụ ịdabere na. Ị nwere ike ka nwere a na-agbalị ma ọ bụrụ na ị na-achọ a freeware na a ezi uche arụmọrụ.
2 PC soja faịlụ mgbake
PC soja faịlụ mgbake bụkwa a freeware maka agbake furu efu faịlụ. Ọ nwere ike na-agbake gị data ọbụna mgbe ike mbanye na-ubé mebiri emebi na ọ dịghị ihe recoginised na BIOS. Na m ule, ọ na-egosi na-anabata succes ọnụego nke na-agbake ehichapụ faịlụ site egweri biini na n'akụkụ ndị ọzọ nke ike mbanye. It`s pụrụ iche mgbake ọrụ na-akwado DOC, XLS, HTML, exe, jpg, MP3 wdg - kpam kpam 25 nkịtị faịlụ na ụdị na Windows, nke ga-ezu maka a freeware. N'agbanyeghị ihe ọma niile atụmatụ, na scanning usoro were ogologo oge karịa m tụrụ anya (mgbe ụfọdụ ihe karịrị ọkara otu awa ebe e nwere ọtụtụ ihe na-ike iṅomi).
Mmechi: tụnyere ndị ọzọ free ngwaọrụ, PC soja nwere dịtụ mma mgbake àgwà na-enye nkwado n'ihi na ihe data formates, mgbe na ngwa ngwa scanning usoro-ewetara ya azụ ka nkezi larịị.
Ngwọta 2: irè ụzọ naghachi faịlụ mgbe ihichapụ si egweri biini
Ọ bụrụ na otu na-achọ ka a effecitive software na ihe ụdị faịlụ nkwado, ngwa ngwa scanning ọsọ, miri scanning omimi na mma mgbake qualtiy. Wondershare Data Recovery Kwesịrị ezi nhọrọ. Ọ na-enye atọ mgbake mode (Echefuola faịlụ Recovey, Raw mgbake na nkebi Iweghachite) karịa 550 formats nke data, nke na-agụnye fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị (gụnyere akwụkwọ, foto, videos, audios ozi & email na-edebe ihe ochie wdg) na kọmputa.
Ma e wezụga si egweri biini, ọ pụkwara weghachi data si na ebe nchekwa kaadị, ike draịva, mbughari redrives, flash draịva, igwefoto dijitalụ / camcorder na cellphones.
Iji weghachite furu efu akwụkwọ, ihe oyiyi, videos, audios, Archives na ihe ọ bụla ndị ọzọ ụdị faịlụ site na egweri biini, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru na enyemaka nke Wondershare Data Recovery:
Nzọụkwụ 1 Họrọ faịlụ ụdị mgbake
Ebe i nwere ike họrọ ụdị nke faịlụ na ị na-aga na-bacl, dị ka photos, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ na email. Na ị na-nwere ike họrọ niile ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ niile ị na-efu. Dị nnọọ ego onye.
Nzọụkwụ 2 Họrọ naghachi egweri biini
Iji naghachi faịlụ ehichapụ egweri biini, ị nwere ike ịlele "egweri biini" n'ebe a, nke nwere ike inyere ịchọ niile ehichapụ faịlụ site na egweri biini.
Nzọụkwụ 3 naghachi ehichapụ faịlụ site egweri biini
Mgbe scanning okokụre, ị ga-enwe ike ihuchalu Doppler N'ihi ya, nke e nkewa ụdị. Ego ndị faịlụ ị chọrọ iji naghachi na iti on "Naghachi" iji nweta ha azụ.
Mgbe ị na-ahụghị gị chọrọ data azụ, ị nwere ike họrọ ihe ndị miri Doppler ma ọ bụ ọzọ mgbake mode iji weghachite ha ọzọ.
N'agbanyeghị otú i si gbakee gị faịlụ site na egweri biini, na-eso ndị a Atụmatụ iji hụ na gị mkpa data`s nche:
Ndabere gị dị mkpa faịlụ ọma
Zọpụta natara faịlụ na ọzọ nkebi dị iche iche si iyi nkebi zere data overwriting.
Olee otú Igosi Freecom mpụga ike mbanye Data Recovery
Olee otú Igosi G-Technology mpụga ike mbanye Data Recovery
HP Data Recovery: Olee naghachi Data si HP Computer
> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site egweri biini